Daawo Gudoomiye Cirro oo ka hadlay colaada ka soo cusboonatay Ceel Afweyne ee shanta qof lagu diley. Waxa kale oo uu ka hadlay sawirkii maanta saxaafada soo galay ee weftigii xujaajtii Somaliland iyo Kuwii Somaliyi ku wadagaleen | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Daawo Gudoomiye Cirro oo ka hadlay colaada ka soo cusboonatay Ceel Afweyne ee shanta qof lagu diley. Waxa kale oo uu ka hadlay sawirkii maanta saxaafada soo galay ee weftigii xujaajtii Somaliland iyo Kuwii Somaliyi ku wadagaleen
Inaad Saamo jidid iyo sanqdha tirasho kala daa. Way cadahay, shacbiga reer Somaliland waa Somaliland. Waxayna ka muuqataa ficilkooda oo wixii ay dadka ku caayayeen inay sameeyaan iyagay dibu dhac ku tahay. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale durey in komishanku ay dadka la soo hor istaageen doorashadii ma dhacayso, siduu sharcigu yahay inay madaxweynaha uun u qoraanbay ahayde inay dadka la soo hor istaagaan dorashadii ma dhacayso wax sax ah may ahayn, waxaanu sheegay in doorashadii dhacayso.